Joan Laporta oo sheegay inaysan raalli gelin doonin UEFA iyo qaabka ay uga hortagi doonaan in laga ganaaxo Champions League – Gool FM
Joan Laporta oo sheegay inaysan raalli gelin doonin UEFA iyo qaabka ay uga hortagi doonaan in laga ganaaxo Champions League
Ahmed Nur May 29, 2021
(Barcelona) 29 Maajo 2021. Waxaa sii kordhay hanjabaadaha UEFA ay u gudbineyso kooxaha Real Madrid, Juventus iyo Barcelona kuwaasoo aanan wali si rasmi ah uga soo laaban go’aankii ay ku aas-aaseen mashruucii European Super League.
Xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ayaa kusoo cel-celiyay dhowr jeer inuu xeerka anshaxa ee UEFA la tiigsan doono saddexdan naadi, maadaama sagaalkii koox ee kula jiray bilawga mashruuca ay isaga baxeen sidoo kalena ay cafis weydiisteen UEFA.
Haddaba, madaxweynaha Barcelona ee Joan Laporta ayaa si cad u sheegay inaysan kooxdiisa raalli gelin doonin xiriirka UEFA sidoo kalena aysan aqbali doonin ciqaab kaga timaadda dhanka xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub.
“Waan u sheegay [Aleksander] Ceferin inaan qorsheyneyn inaan ka raali gelinno fikirka tartan kale, sidoo kale qorshaha nooguma jirto inaan bixinno ganaax” ayuu yiri Madaxweyne Laporta.
“Haddii ganaax nala saaro, waxaan aadeynaa CAS [the Court of Arbitration for Sport] (Maxkamadda garsoorka isboortiska), hal-beeg la isku hubo ayaan helnay kaasoo noo ogolaanaya inaan agaasinno tartammo” ayuu hadalkiisa kusii daray madaxweynaha Blaugrana.
58-sano jirka reer Spain ayaa geesta kale sheegay inay wali kooxdiisa ku adkeysaneyso inay xor u tahay inay tartan kale bilawdo, sidoo kalena ay maxkamad la tiigsan doonto UEFA haddii xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub uu ganaax dul dhigo kooxdooda.
Maxay labada macallin iyo ciyaartoyda labada naadi ka yiraahdeen kulanka caawa ee Man City vs Chelsea?
Kaddib saxiixa David Alaba, ka boggo todobada ciyaaryahan ee u soo wada ciyaaray Kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich